पढाउन इच्छुक छु – पूर्व राष्ट्रपति डा. यादव [अन्तर्वार्ता]
डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुन् । जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान जारी गर्ने सौभाग्य उनैले पाए । उक्त संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला पूर्व राष्ट्रपति यादव भने सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । बेलाबेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा केही कार्यक्रममा देखिन्छन्, बाँकी समय आराममै बितिरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव बुधबार तनहुँको व्यास नगरपालिकाको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन सममारोहमा भाग लिन दमौली आएका थिए ।
त्यसक्रममा एक दिन दमौलीमा रहेका डा. यादवसँग पत्रकार डम्बर अधिकारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
भगवानको कृपा र सम्पूर्ण नेपाली जनताको शुभेच्छले गर्दा मेरो स्वास्थ्यमा अहिले त्यस्तो खासै समस्या छैन । क्यान्सरको उपचारपछि स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आएको छ । तैपनि स्वास्थ्य अवस्था नबिग्रियोस् भनेर सजगता भने अपनाइरहेको छु ।
हिजोआज दैनिकी कसरी बित्दैछ ?
बिहान प्रायः साढे ४ बजे उठने गर्छु । नित्य कर्म सकेपछि बिहान ८ बजेसम्म योगादेखि विभिन्न व्यायम गर्ने गर्छु । जुन कार्य स्वस्थ्य रहनका लागि अपरिहार्य जस्तै भएको छ । यदि नियमित रूपमा व्यायम गरिन भने मेरो स्वास्थ्य समस्या आइहाल्छ ।
व्यायम सकेपछि चिया, कफीसँगै पत्रपत्रिका पढ्छु । अनि १२ बजेतिर बिहानको खानपिन गरेपछि केहीबेर आराम गरेर भेट्न आएका साथीभाइलाई समय दिन्छु । कतैबाट कुनै कार्यक्रमको निमन्त्रण आएमा ति कार्यक्रमहरू सहभागी हुने गर्दछु । यसका अलावा फुर्सद निकालेर विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने गर्दछु । साथै आफ्नो जीवनको आत्मवृतान्तका बारेमा समेत तयारी गरिरहेको छु ।
नेपाली जनताको अथक प्रयासबाट मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई संस्थागत गर्नु हरेक राजनीतिक दल र नेपाली नागरिकको दायित्व हो ।
सामान्य परिवारको व्यक्ति देशको प्रथम राष्ट्रपति बन्छु भनेर कुनै सोच्नु भएको थियो ?
म सामान्य परिवारको व्यक्ति हुँ । राजनीतिमा लागेर देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्छु होला भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइन ।
खासगरी बीपी कोइरालाको संगतले गर्दा म बिस्तारै राजनीतिमा होमिन पुगेँ । शुरूमा बिस्तारै राजनीतिमा होमिएको भएपनि पछि पूर्ण रूपमा होमिन पुगे । यसरी होमिँदै गर्दा पार्टी तथा सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यतिबेलासम्म पनि यो स्थानमा पुगौंला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । तर राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्न पुगेँ ।
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाले पनि यतिबेला भने म अन्य नेपाली नागरिकजस्तै सामान्य नागरिक हुँ ।
विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू सामाजिक सेवादेखि आफ्नो पुरानै पेशामा फर्कने गरेको पाइन्छ । नेपालमा यो कार्यको थालनी तपाईंबाटै होस् भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा रहेको छ । यसमा तपाईंको के धारणा छ ?
राम्रो कुरा उठाउनुभयो । विश्वका अन्य मुलुकमा पूर्व राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरू सामाजिक सेवादेखि आफ्नो पुरानो पेशामा फर्किएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । मेरो व्यक्तिगत जीवनमा भन्नुहुन्छ भने सामाजिक सेवादेखि पुरानै पेशामा फर्कने सोच मभित्र पनि छ । तर कुन माध्यमबाट अगाडि बढौं भन्नेमा अन्यौल भइरहेको छ ।
अमेरिकालगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सामाजिक सेवामा लाग्न राज्यले नै बजेट उपलब्ध गराएको अवस्था छ । जसका कारण उनीहरू सहज रूपमा सामाजिक सेवामा समर्पित भइरहेको अवस्था छ । तर हामीकहाँ उक्त कार्यको थालनी हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सेवा गर्ने भन्दैमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति एनजीओ/आईएनजीओ खोलेर हिँड्न त्यति सुहाउला जस्तो लाग्दैन । तैपनि यो विषयमा सोच्दैछु । बुद्धिजीवि र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दैछु ।
पुरानो पेशामा फर्कने विषयमा भने शारीरिक अवस्था लगायत चिकित्सा विज्ञानमा भएका नयाँ प्रगतिका कारण केही समस्या देखेको छु ।
पुरानो पेशामा फर्किएर कुनै बिरामीको उपचार गरेँ भने उक्त बिरामीलाई नियमित परीक्षण गरिरहनु पर्छ । उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा मेरा लागि कठिन बन्दै जान थालेको छ । त्यही कारणले गर्दा मैले पुरानो पेशामा फर्कने आँट नगरेको हो । यद्यपि मेडिकल कलेजलगायत अन्य क्षेत्रमा आफूसँग भएको ज्ञान बाँड्ने सोच भने बनाएको छु ।
तपाईंलगायत पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याए भन्ने आरोप छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
राज्यको ढुकुटी अनावश्यकरूपमा खर्च गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्य हो । राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने विषयमा खर्च गर्नुअगाडि राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सोच्नु जरुरी छ ।
मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले राज्यको ढुकुटी रित्याउने हिसाबले खर्च गरेँ जस्तो लाग्दैन ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मेरा विषयमा पनि कुरा नउठेका होइनन् । मैले उपचारका क्रममा राज्यबाट रकम लिएको हुँ । तर मुलुकलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर अस्पताललाई कन्भिन्स गरेर डिस्काउन्ट बापतको रकम राज्यलाई फिर्ता समेत गरेको छु ।
म त्यस्तो कुनै उच्च घरानिया परिवारको व्यक्ति होइन । सामान्य परिवारको व्यक्ति हुँ । मैले जीवनभर देश र जनताका लागि लडेँ । आफूसँग भएको केही व्यक्तिगत सम्पत्ति पहिले नै छोराछोरीलाई भाग लगाइदिसकेको छु ।
अहिले उमेर ढल्कदै जाँदा रोगले आक्रमण गर्न थालेको छ । त्यसको उपचार गर्नका लागि कि त राज्यसँग गुहार गर्नुपर्‍यो कि त छोराछोरीलाई दिएको सम्पत्ति फिर्ता माग्नुपर्‍यो ।
राष्ट्रपति हुँदादेखि नै हिमाल, पहाड र तराई जोड्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो ? तर तपाईंले भने जस्तो हिसाबले मुलुकमा संघीयता लागू गर्न सकिएन नि ?
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको मुलुक हो । यो मुलुकमा जो जहाँ बसेपनि हिमाल, पहाड र तराई जोडिनु जरुरी छ । मुलुकलाई संघीयतामा लैजाँदै गर्दा दलका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुने सकेन । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । भावनात्मक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई जोड्नतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
मेडिकल कलेजलगायत अन्य क्षेत्रमा आफूसँग भएको ज्ञान बाँड्ने सोच भने बनाएको छु ।
तपाईं राष्ट्रपति हुँदा संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यो मेरो जीवनको अत्यन्त सुखद् पक्ष हो । किनकि नेपाली जनताले ६ दशकभन्दा अगाडिदेखि उठाउँदै आएको संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउनुपर्ने आवाज म राष्ट्रपति हुँदा पूरा हुन पुग्यो । यद्यपि संविधान जारी गर्ने विषय त्यति सहज थिएन । त्यसमा दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जसका कारण संविधान जारी हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था भने छैन । तसर्थ संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दलहरू सजग हुनुपर्दछ ।
सरकार र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका दुुई पाटा हुन् । यी दुईपाटा मध्ये एउटा धरासायी भएमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ लोकतन्त्रका यी दुईपाटा समेत जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।